Qoyskii Marxuun Yariisow oo booqday xafiiskii uu ku shaqeyn jiray ee xarunta gobalka Banaadir – Bandhiga
Qoyskii Marxuun Yariisow oo booqday xafiiskii uu ku shaqeyn jiray ee xarunta gobalka Banaadir
Caruurta iyo Xaaska Gudoomiyihii hore ee gobalka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Eng Yariisow ayaa maanta tagay Aqalka Dowladda hoose ee Xamar waxa ayna booqdeen Xafiiskii uu ku shaqayn jiray.
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyada Gobolka Banaadir Ibraahim Cumur Mahadale Ibraahim Dheere ayaa ehelada maruxuun Yariisow ku soo dhaweeyay xafiiska waxa uuna ugu mahadceliyay Booqashadda ay ugu yimaadeen.
”Waxaan maanta xarunta Dowladda Hoose kusoo dhaweeyey qoyska Allaha u naxariistee Duqii hore ee Muqdisho ahaana Guddoomiyaha gobolka Banaadir Shahiid Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow)
Mahadale ayaa sheegay inuu soo kala tusay qaybaha kala duwan ee xafiisyada Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar iyo howlaha socda oo maamulku dar-dar ku wado.
“Waxaan u ballan qaadnay in aan sii wadi doono dedaalkii, dhabar adaygii, shaqadii geesinimada lahayd iyo wadaninimadii uu ku sifoobey ayana noqon doonto mid mar waliba xusuus ku sii ahaan doonta qalbiyadeena” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Eng Yariisow ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray Weerar ismiidaamin ahaa oo Al shabaab sheegatay Masuuliyadiisa kaas oo 24 Juulay ee sanadkaan lagu qaaday Xarunta Gobolka Banaadir.